#Xoghayaha Gaashaandhigga Britain oo booqasho ku tagey Muqdisho iyo Hargeysa | Get Latest News From Horn of Africa |
#Xoghayaha Gaashaandhigga Britain oo booqasho ku tagey Muqdisho iyo Hargeysa
Magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa waxaa maanta booqasho aan horay loosii shaacin ku tagey Xoghayaha Gaashaandhigga Britain Gavin Williamson.
Gavin Willamson ayaa booqashada uu ku tegey Magaalada Muqdisho waxa uu garoonka diyaaradaha kula kulmay diblumaasiyiinta u joogta dalka Britain Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ka jooga magaalada Muqdisho.
Wali lama sheegin in uu la kulmay Madaxda Dowlada Soomaaliya wax faah faahin ahna lagama helin safarka uu manta ku yimidi Magaalada Muqdisho Xoghayaha Gaashaandhigga Britain
Intaas kadib Gavin Willamson waxa uu booqasho ku tegey maanta magaalada Hargeysa ee xarunta Maamulka Somaliland.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ayaa xafiiskiisa kusoo dhaweeyay Xoghayaha Gaashaandhigga Britain Gavin Williamson halkaas oo kulan sacaado qaatay ay ku yeesheen.
Kulanka ayaa looga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo Boqortooyada Ingiriiska oo ay Somaliland xoriyadeeda ka qaadatay 1960-kii, iyadoo safarka wasiirkuna uu yahay safarkii u horeeyey ee masuul haya xilka wasiirka difaacu uu ku tago deegaanada Soomaaliland.
Wuxuu ku soo dhammaaday kulanka is-afgarad buuxa iyo in la sii xoojiyo cilaaqaadka labada dal ee Ingiriiska iyo Somaliland, lana dar-dar geliyo horumarinta arrimaha iskaashi ee ka dhexeeya labada waddan,sida uu warbaahinta u sheegay Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliland.
Madaxweynaha Soomaaliland waxaa kulanka ku wehelinayey Wasiirrada Arrimaha Dibedda iyo iskaashiga caalamiga ah, gaashaandhigga iyo qunsulka Soomaaliland u qaabilsan Dalka Ingiriiska.
Lama Oga sababta uu Xoghayaha Gaashaandhigga Britain Gavin Williamson uu kala doortay in uusan la kulmin Madaxda Dowlada Soomaaliya islamarkaana uu la kulmo Madaxda Somali-land.
Dowlada Britain ayaa gumeystay Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya kuwaas oo hada loo yaqaan Somali-land ayadoo xoriyadii Goboladaas kadib Britain xiriir wanaagsan ay la leedahay Maamulka Goboladaas ka hana qaaday ee Somali-land.